फ्रिजयुक्त औषधिहरू सहित कसरी यात्रा गर्ने चेकअप - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कल्याण औषधि जानकारी, समाचार औषधि बनाम मित्र घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी भारी खेल मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी खेलहरु समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> फ्रिजयुक्त औषधिहरूको साथ कसरी यात्रा गर्ने
फ्रिजयुक्त औषधिहरूको साथ कसरी यात्रा गर्ने
शहरको बाहिर यात्राको लागि प्याकिंग गर्दै, विशेष गरी एक जसमा हवाई यात्रा समावेश छ, जटिल हुन सक्छ। तपाईंले आफ्नो सामानको वजन, तपाईंको क्यार-अनको आकार, TSA आवश्यकताहरू र, केही यात्रुहरूका लागि बिन्दु A बाट बिन्दु B सम्म कसरी रेफ्रिजरेटेड औषधीहरू कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने जस्ता चीजहरूको बारेमा सोच्न आवश्यक छ। फ्रिजमा फ्रिज गर्न आवश्यक औषधिले समावेश गर्दछ इन्सुलिन , केहि एन्टिबायोटिक निलम्बन , र केहि जीवविज्ञान ।
र यो, डा। नर्मन तोमाका भन्छन्, फ्लोरिडा, मेलबर्न मा एक क्लिनिकल परामर्शदाता फार्मासिष्ट, र को प्रवक्ता अमेरिकी फार्मासिस्ट संघ , पूर्वानुमान को धेरै आवश्यक छ। तपाईं केवल एक बरफ प्याकको साथ ह्यान्डब्यागमा आफ्ना मेडीहरू टस गर्न सक्नुहुन्न र यसलाई राम्रो भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ। यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो भने, तपाईं एक पटक आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दा तपाईं प्रतिस्थापन प्रिस्क्रिप्सनको लागि आफूलाई कोर्रा लाग्न सक्नुहुन्छ।
फ्रिजयुक्त औषधिहरूको साथ यात्राका लागि मार्गनिर्देशनहरू
१. TSA नियमहरू समीक्षा गर्नुहोस्।
औषधीको लागि TSA नियमहरूको साथ आफूलाई परिचित गर्नु फ्रिजयुक्त औषधिसँग उडानको लागि तपाईंको सुरूवात बिन्दु हो, डा। तोमाका सल्लाह दिन्छन्। TSA वेबसाइट प्रदान गर्दछ आधारभूत दिशानिर्देशहरूको एक उपयोगी सूची (सौभाग्यवश, airport.4-औन्स नियम एयरपोर्ट सुरक्षा मार्फत तरल पदार्थ लिने औषधिहरूमा लागू हुँदैन), साथ साथै चिकित्सा अवस्थाको साथ यात्रा को बारे मा सामान्य जानकारी ।
अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरूको लागि, रोग नियन्त्रण र रोकथामको लागि केन्द्रहरू औषधि लिएर विदेश जानका लागि मार्गनिर्देशन एक उत्कृष्ट स्रोत हो; विदेश जाने जो कोहीले जानु भन्दा पहिले यसको परामर्श लिनु पर्छ।
२. तपाईंको मेडेस कसरी भण्डारण गर्नुपर्दछ जान्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले यो सबै गरिसकेपछि डा। तोमाका सल्लाह दिन्छन् कि तपाईंको औषधीको लागि फ्रिजेशन अनिवार्य छ वा साधारण रूपमा। रुचाइएको (तपाईंको फार्मासिष्टले यो जानकारी आपूर्ति गर्न सक्षम हुनुपर्दछ)। यदि यो अनिवार्य छैन भने, यसलाई रेफ्रिजरेट गरिसकेपछि तपाईं आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुहुनेछ पर्याप्त हुन्छ (यात्रा को लम्बाईमा निर्भर गर्दै)। यदि यो छ अनिवार्य, तपाईंले यसलाई सुन्दर राख्नको लागि एक मार्ग खोज्नु पर्छ। जे भए पनि, तपाइँको प्रिस्क्रिप्शन मेड्सलाई जाँच गरिएको लग्गेजमा नराख्नुहोस्।
सम्बन्धित: प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्सका साथ यात्राका लागि tips सल्लाहहरू
Medication. औषधि सुरक्षित रूपमा प्याक गर्नुहोस्।
डाक्टर तोमाका भन्छिन्, कहिले पनि तपाईको औषधि सामानमा नलगाउनुहोस्। तपाईंको सुरक्षा र सुरक्षाको लागि, यो क्यारी-अन ब्यागमा जान आवश्यक छ। उनीहरूको मूल कन्टेनरमा औषधीहरू सँधै छोड्नुहोस् र उनीहरूलाई शीतल कन्टेनरमा राख्नु अघि त्यसलाई लेबल लगाइएको प्लास्टिकको झोलामा राख्नुहोस्, सार्वर्ड्स र डा। तोमाका सल्लाह दिन्छन्।
Port. पोर्टेबल कूलि Use प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईको मेड्सलाई शान्त राख्ने सन्दर्भमा, डा। तोमाका भन्छन् कि त्यहाँ धेरै ग्याजेटहरू र पोर्टेबल कूलरहरू छन् जुन तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ जुन यस उद्देश्यका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो। (पोर्टेबल कूलर) सँग शीतलन गर्ने एजेन्टका लागि अलग कम्पार्टमेन्ट छ र औषधी पनि छ, र उनीहरु टीएसए एजेन्टलाई हवाई यात्राका लागि प्रस्तुत गर्न धेरै सजिलो छ, उनी भन्छन्।
तपाईं आफ्नै पोर्टेबल बरफ चेस्ट र कूलर जेल प्याक (खाजा बक्सको लागि प्रयोग गरिएको प्रकार जस्तै) पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, विक्की सवर्ल्ड्सका लागि नर्सि nursing स्रोतहरूको निर्देशक भन्छन्। राहदानी स्वास्थ्य , उत्तरी अमेरिका भर ट्राभल मेडिसिन र खोप क्लिनिकहरूको नेटवर्क। जे होस्, यदि तपाईं त्यस मार्गमा जानुहुन्छ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि जेल प्याकहरू लेबल गरिएको छ ताकि उनीहरूले सुरक्षा चेकपोइन्टमा कुनै भौंहरू उठाउँदैनन्, डा। तोमाका भन्छन्।
यदि तपाईं बर्फ बरफ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यो पनि राम्रो छ, सवर्ड्स भन्छन्, जब सम्म तपाईं यसलाई पूर्ण रूपमा पग्लनु भन्दा पहिले आइस प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ — तपाईं पगेटिनु भएको बरफ तपाईंको औषधिमा र / वा यसको प्याकेजि intoमा चुहिन चाहनुहुन्न। सुक्खा बरफ, यसको बारेमा सोच्नुहोस् पनि, डॉ Tomaka भन्छन्।
सुख्खा बरफ धेरै कारणले खतरनाक छ, उनी भन्छन्। एक, तपाईं यसलाई ह्यान्डल गर्न चाहनुहुन्न; र, दुई, यो स्थिर [जसले औषधि नष्ट गर्दछ]।
सम्बन्धित: के तपाईं एक फ्लाइट मेडिकल आपतकालिनको लागि तयार हुनुहुन्छ?
Make. तापमान स्थिर रहेको निश्चित गर्नुहोस्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, के तपाईं आफ्नो रेफ्रिजरेटेड औषधी राख्न चाही राख्नको लागि प्रयोग गर्नुहोला ट्रिप भर तापमान स्थिर राख्न निश्चित गर्नुहोस्।
फ्रिजमा र बाहिर जाँदा औषधीको स्थिरता भंग हुन सक्छ, डा। तोमाका भन्छिन्, यदि तपाईं सुरक्षाको थप तह चाहानुहुन्छ भने तपाईं जहिले पनि कन्टेनरमा थर्मामिटर राख्न सक्नुहुनेछ ताकि यो ठीक टेम्पमा रहनेछ। उपयुक्त तापमान के हो भनेर निश्चित हुनुहुन्न? तपाईंको फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस्।
Airline. एयरलाइन कर्मचारीहरु संग कुरा गर्नुहोस्।
डा। तोमाकाले उडान परिचारकहरूसँग कुरा गर्ने सल्लाह पनि दिन्छन् — उनीहरूले तपाईंको मेड्स तपाईंको लागि फ्रिजमा राख्न, वा तपाईंलाई नयाँ बरफको आपूर्ति गर्न सक्षम हुन सक्छन्। र, उनी यात्रुहरूलाई प्रिस्क्रिप्स, कागजातहरूको पत्रहरू, र क TSA चिकित्सा सूचना कार्ड तपाइँले बोक्नु भएका सबै औषधीहरू (रेफ्रिजरेटेड र गैर-रेफ्रिजरेटेड) लाई सूचीबद्ध गर्दछ।
यस तरिकाले, सबै एक रेफ्रिजरेसन दुर्घटनाको घटनामा हराउने छैन। अर्को शब्दहरूमा, तपाईंसँग तपाईंको मेडेस प्रतिस्थापन गर्ने क्षमता छ।
COVID-19 vs SARS: मतभेदहरू सिक्नुहोस्
संयुक्त राज्य अमेरिकामा common साधारण पोषक कमीहरू।
प्रारम्भिक गर्भावस्था को समयमा रगत को थक्का पारित
के म एकै समयमा claritin र flonase लिन सक्छु?
उच्च रक्तचाप कम गर्न प्राकृतिक उपचार
कति लामो 2mg xanax तपाइँको प्रणाली मा अन्तिम हुन्छ
पसिनाले भिजेको ज्वरो छैन